Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Lozam-pifamoivoizana nahafaty olona indrindra tany Taiwan
Taiwan no toerana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona indrindra tao amin'ity firenena nisintahan'ny saina sinoa ity, fara fahakeliny, olona 36 no namoy ny ainy tamin'ity fianjeran'ny tionelina ity
Ny atsinanana somary misy mponina any amin'ny faritany sinoa mandehandeha any Taiwan dia malaza amin'ny mpizahatany, ary maro amin'izy ireo no tonga manaraka ny lalamby amoron-tsiraka mba hisorohana ny làlan'ny tendrombohitra mamitaka.
Fiaran-dalamby mpandeha iray misy mpandeha 400 mahery no namaky ny fiara teo amin'ny lalamby ary nivily lalana tany ivelan'ny tionelina iray any Taiwan ny zoma.
Farafahakeliny olona 36 no maty ary maratra maro. Niakatra teo am-baravarankely ireo tafavoaka velona ary nanatrika tafo mba hahazoana fiarovana amin'ny loza voajanahary indrindra tamin'ny nosy nandritra ny am-polony taona maro.
Niakatra teo am-baravarankely ireo tafavoaka velona ary nanatrika tafo mba hahazoana fiarovana amin'ny loza voajanahary indrindra tamin'ny nosy nandritra ny am-polony taona maro.
Ny fianjerana dia nitranga teo akaikin'ny faritra mahafinaritra an'i Toroko Gorge tokony tamin'ny 9 ora maraina tamin'ny andro fialantsasatra iray ary nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny distrikan'i Hualien fa mitohy ny ezaka famonjena. Ny fampitam-baovao dia nilaza fa mpandeha 400 mahery no tao anatiny.
Ny tatitra kosa dia nilaza fa kamio na karazana fiara mifandimby iray no nianjera avy teny amin'ny hantsana iray ka nianjera teny amin'ireo lalana, ka nisy fiaran-dalamby mivoaka avy ao anaty tionelina iray nianjera taminy. Amin'ny ankabeazan'ny lamasinina mbola voafandrika ao anaty tionelina, ireo mpandeha nitsoaka dia noterena handrefesana ny varavarana, ny varavarankely ary ny tafo mba hahazoana fiarovana.
Toa voadona ny fiara taorian'ny nipoiran'ny lokomotera, ka niteraka fahasimbana lehibe indrindra tamin'ny fiara 1-5, hoy ny sampana mpamonjy voina ao amin'ny distrikan'i Hualien.
Lahatsary sy sary amin'ny fahitalavitra navoakan'ny olona teo amin'ny sehatra tao amin'ny tranonkalan'ny masoivohom-baovao ofisialin'ny Central News dia mampiseho ny olona mihanika ny varavarana misokatra amin'ny lalàm-by eo ivelan'ny fidirana amin'ny tionelina. Ny atin'ny fiara iray dia natosika hatrany amin'ny seza mifanila aminy.
Ny loza dia tamin'ny andro voalohany tamin'ny Fetin'ny Fandrasana Fasana efatra andro, festival ara-pinoana isan-taona rehefa mandeha any amin'ny tanàna niaviany ny olona mba hivorian'ny fianakaviana sy hivavaka any amin'ny fasan'ny razany.
Taiwan dia nosy be tendrombohitra izay ny ankamaroan'ny mponina ao aminy 24 tapitrisa dia voahidy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka avaratra sy andrefana. Ny atsinanana kely mponina dia malaza amin'ny mpizaha tany, ary maro amin'izy ireo no tonga manaraka ny lalamby amoron-tsiraka mba hisorohana ny lalan'ny tendrombohitra mamitaka.
Ny rafitry ny lalamby marobe any Taiwan dia nisy fanavaozana be dia be tao anatin'izay taona vitsivitsy izay, indrindra fa ny fanampiana ny tsipika haingam-pandeha mampitohy ny renivohitra Taipei amin'ireo tanàna amoron-tsiraka andrefana mankany atsimo.